Soomaaliya oo beenisay in muran dhexmaray wefdigii dowladda ee Brussels iyo midowga Yurub – Radio Daljir
Soomaaliya oo beenisay in muran dhexmaray wefdigii dowladda ee Brussels iyo midowga Yurub
Nofeembar 28, 2013 3:18 b 0
Brussels, November 28, 2013 – Wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya ayaa beenisay qoraal uu baahiyey wargayska International Business Times ee dalka Maraykanka, kaas oo lagu sheegay in uu muran adag dhexmaray wefdigii Soomaaliya ee shirka Brussels iyo ururka midowga Yurub.
IBTimes waxaa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya ay shirka ka sheegtay in yaboohi dhaqaale ee midowga Yurub aan la soo gaarsiin Soomaaliya, halka madaxa horumarinta midowga Yurub uu sheegeen in ay arrintaas tahay war aan jirin.
Marwo Fowsiyo Yuusuf ayaa maanta ka jawaabtay qoraalka uu Wargayska IBtimes qoray, waxay sheegtay in uusan jirin wax khilaaf oo dhexmaray midowga Yurub iyo Soomaaliya, isla markaasna ay dowladdu u mahadcelinayso EU-da
Wasiirka arrimaha dibbeda ayaa tiri ?EU ?waa deeq bixiyaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya, waxaana uga mahad-celineynaa wax kasta oo ay naga caawimayaan si aan uga soo kabanno in ka badan 20 sano oo dagaal ah.?
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay ku kalsoon tahay qorshaha horumarinneed ee midowga Yurub uu la damacsan yahay Soomaaliya mustaqbalka dhow. dhowr jeer ayaa Soomaaliya sheegtay in aan dalka weli la soo gaarsiin 1.8 bilyan oo Uero oo lagu balan-qaaday shirkii Brussels ee September.
Khaatumo oo Puntland ku eedaysay dagaalo shalay iyo maanta ka dhacay gobolka Sool (Dhegeyso)
Dowladda Soomaaliya oo xoojisay howl-gallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolka Bakool